သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ- ၎င်းတို့သည် အဘယ်အရာနှင့် အကြောင်းတရားများ | Green Renewables များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများ. အများစုမှာ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းကြောင့် တူညီသော အရှိန်ဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လာကြသည်။ ဤအရာအားလုံးသည် လူသားတို့၏ ရိုင်းစိုင်းစွာ စားသုံးမှုကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးယိုယွင်းလာစေသည်။ လူသားတို့၏ စားသုံးမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျိုးဆက်ပွားနိုင်စွမ်းထက် ကျော်လွန်သော ထုတ်ကုန်များ ရယူမှုအပေါ် အခြေခံသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကြုံတွေ့နေရသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များအကြောင်း သင့်အား ပြောပြပါမည်။
1.1 ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု
1.2 အက်ဆစ်မိုးရွာခြင်းနှင့် သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း။
1.3 မြေဆီလွှာပျက်စီးခြင်းနှင့် ညစ်ညမ်းခြင်း။
2 မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
2.1 အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း မရှိခြင်း။
2.2 ပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုနှင့် ဂေဟစနစ်ခြေရာခံ
3 ဇီဝဗေဒအဆင့်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
ကမ္ဘာမြေကြီးသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့် အပူချိန်များ ပိုမိုမြင့်မားလာခြင်း၊ ၎င်းမှာ လူသားများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် အရှိန်မြှင့်လာရခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားများကို တွန်းပို့ပြီး ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှု တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတိုင်းသည် လေထုထဲသို့ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန် ကမ္ဘာ့ကတိကဝတ်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ ယင်းအတွက်၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၊ အများသူငှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုသည့် ကားများပေါ်တွင် လောင်းကြေးထပ်ရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းမှ ထုတ်လွှတ်မှုများအား ထိန်းညှိပေးသည့် ဥပဒေများကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
လေထုညစ်ညမ်းမှု ဆိုသည်မှာ လေထုထဲတွင် ညစ်ညမ်းစေသော အရာများ ရှိနေခြင်းမှာ သဘာဝနှင့် လူလုပ်သော အကြောင်းအရင်း နှစ်မျိုးလုံး ရှိသည်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေသော အကြီးမားဆုံး အကြောင်းအရင်းများမှာ- ဓာတုဗေဒ ထုတ်ကုန်များနှင့် သတ္တုတွင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော စက်ယန္တရားများ တူးဖော်ခြင်း၊ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း၊ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ မီးရှို့ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးတွင် ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုခြင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
၎င်းကိုလျှော့ချရန်အတွက် အများသူငှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကို တာဝန်သိစွာ စားသုံးခြင်း၊ ပိုမိုစိမ်းလန်းသော ဧရိယာများ တည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချရန် စားသုံးမှု လျှော့ချခြင်းစသည့် အစီအမံများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
အက်ဆစ်မိုးသည် ရေနှင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အထူးသဖြင့် မော်တော်ယာဥ်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများမှ အက်ဆစ်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်သည်။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့၊ ညစ်ညမ်းတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့၊ မကိုက်ညီတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ပိတ်ပစ်ဖို့နဲ့ လောင်စာဆီရဲ့ ဆာလဖာပါဝင်မှုကို လျှော့ချဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မှာ မြှင့်တင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
FAO (ကုလသမဂ္ဂ အစားအစာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့) သည် တောင်အမေရိကနှင့် အာဖရိကရှိ မည်သည့်နိုင်ငံများကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ရေရှည်မတည်တံ့သော စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ထင်းအလွန်အကျွံ ထုတ်ယူသုံးစွဲမှုကြောင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှုဒဏ်ကို အများဆုံးခံရသည်။. တောမီးလောင်မှု အချိုးအစား နည်းပါးသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံ့အပြားတွင် နှစ်စဉ် သစ်ပင်ထောင်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးရသည့် အကြောင်းရင်းလည်း ဖြစ်သည်။
မြေဆီလွှာပျက်စီးသွားသောအခါ ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ ဆုံးရှုံးသွားသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး သို့မဟုတ် ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ မြေဆီလွှာပျက်စီးရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများသည် မတူညီသောအချက်များကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ပြင်းထန်သော သစ်ခုတ်ခြင်း၊ ကျယ်ပြန့်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ စားကျက်ပိုလျှံခြင်း၊ တောမီးလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ်များ တည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း။
ဤပြဿနာကို ရှောင်ရှားရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချရန် ဖြေရှင်းချက်မှာ မြေယာအသုံးပြုမှုကို ထိန်းချုပ်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်ရှိသော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ အသုံးပြုခြင်း (ပိုးသတ်ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဓာတ်မြေသြဇာများ သို့မဟုတ် မိလ္လာ သို့မဟုတ် မြစ်များကို ညစ်ညမ်းစေခြင်း)၊ မြို့ပြအမှိုက်များကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးနှင့် မိလ္လာညစ်ညမ်းခြင်းတို့သည် အဖြစ်များဆုံး အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။
အန္တရာယ်ရှိသော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ အသုံးပြုခြင်း (ပိုးသတ်ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဓာတ်မြေသြဇာများ သို့မဟုတ် မိလ္လာ သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းသောမြစ်များ)၊ မြို့ပြအမှိုက်များကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးနှင့် မိလ္လာများကို ညစ်ညမ်းစေသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ အဖြစ်များဆုံးသော မြေဆီလွှာ အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။
ဤကဲ့သို့သော ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြေရှင်းနည်းများဖြင့် လျှော့ချနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သော မြို့ပြစီမံကိန်း၊ အမှိုက်များကို ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ မစွန့်ပစ်ရန်၊တရားမဝင် သန့်ရှင်းရေး အမှိုက်ပုံးများ တားမြစ်ခြင်းနှင့် သတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့် စက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ရေးတို့ ဖြစ်သည်။
မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း မရှိခြင်း။
အလွန်အကျွံ စိုက်ပျိုးစားသုံးသူများ၏ နေထိုင်မှုပုံစံများသည် အမှိုက်ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြင့်လာစေပြီး လျော့နည်းလာခြင်းကြောင့် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသော သဘာဝသယံဇာတများကို ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု တိုးလာပါသည်။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် အသိပညာပေးဖို့ လိုတယ်။ လျှော့ချခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော လှုပ်ရှားမှုများမှတစ်ဆင့် မြို့ပတ်ရထားစီးပွားရေးကို အလေးထားပါ။
နိုင်ငံအများအပြားတွင် အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုကို ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ရှိနေပါသည်။ Recycle မလုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ သဘာဝသယံဇာတသစ်များ တိုးမြှင့်ထုတ်ယူခြင်းအပြင် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း နည်းပါးခြင်းကြောင့် အမှိုက်ပုံများတွင် အမှိုက်အများအပြား စုပုံလာစေသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း မရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူများအား အသိပညာပေးခြင်းနှင့် အသိပညာပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးသော်လည်း အစိုးရအနေဖြင့် ကောင်းမွန်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု အောင်မြင်စေရန်အတွက် ၎င်းကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် တစ်ခါသုံး ယဉ်ကျေးမှုကို ထူထောင်ထားပြီး၊ အထူးသဖြင့် ပလတ်စတစ် ထုတ်ကုန်များတွင် ထင်ရှားသည့် ပိုမို သက်တောင့်သက်သာ နေထိုင်မှုပုံစံကို ပေးစွမ်းသည်။ သမုဒ္ဒရာသည် ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုကြောင့် ထိခိုက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ ဤစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည် နောက်ဆုံးတွင် သမုဒ္ဒရာထဲသို့ရောက်ရှိပြီး အဏ္ဏဝါမျိုးစိတ်များ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အပါအဝင် ကုန်းနေမျိုးစိတ်များ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းချက်မှာ ပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်စေသော အခြားထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစားများကို ရှာဖွေသင့်သည်။
ဂေဟဗေဒခြေရာသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦးသည် အသုံးပြုသည့် အရင်းအမြစ်များကို ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ရယူရန် ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာ မည်မျှလိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရည်ညွှန်းသည်။ တာဝန်မဲ့ သုံးစွဲမှုနှင့် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့် တစ်ဦးချင်း ဂေဟစနစ် ခြေရာခံ တိုးများလာသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ဇီဝဗေဒအဆင့်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ မြို့ပြများချဲ့ထွင်ခြင်း၊ စက်မှုစိုက်ပျိုးခြင်း၊ သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်ကို အလွန်အကျွံ အသုံးချခြင်း သို့မဟုတ် မျိုးစိတ်မဟုတ်သော မျိုးစိတ်များကို မိတ်ဆက်ခြင်း၊ တရားမဝင် အမဲလိုက်ခြင်းစသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ဂေဟစနစ် ယိုယွင်းပျက်စီးလာပါသည်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် အခြားလူ့လုပ်ဆောင်မှုများသည် အဓိက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြစ်သည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ဆုံးရှုံးခြင်း။ အဖြေရှာရန်၊ သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်ကို လေးစားလိုက်နာရန် အသိပညာပေးခြင်းအပြင် သဘာဝ နယ်မြေကိုလည်း ဥပဒေဖြင့် အကာအကွယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့၏ မွေးရပ်မြေမှ သက်ရှိများကို ဖမ်းယူ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် တရားမဝင်မျိုးစိတ်များအတွက် စျေးကွက်များရှိပြီး နောက်ဆုံးတွင် မျိုးစိတ်ထိုးဖောက်ဟု ယူဆသည့် အခြားနေရာများသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ နယ်မြေနှင့် စားနပ်ရိက္ခာအတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဧရိယာအတွင်း ရောဂါအသစ်များ ပျံ့နှံ့မှုကြောင့်၊ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသော မျိုးစိတ်များသည် နောက်ဆုံးတွင် ဇာတိမျိုးစိတ်များကို အစားထိုးနိုင်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ရင်ဆိုင်နေရသော အမျိုးမျိုးသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပတ်ဝန်းကျင် » ပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာများ